2020 MacBook Pro 13” မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Apple
2020 MacBook Pro 13? နှစ်သစ်အတွက် MacBook Line-up ကို Upgrade လုပ်ပေးခဲ့တာ ဒီတစ်ခေါက် နောက်ဆုံးလို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒီဇင်ဘာမှာတုန်းက 16” MacBook Pro နဲ့ သွားရည်ယိုအောင် လုပ်ခဲ့သလို အများစုက 14” MBP လာမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားတာပါ။
ဒါမယ့်လည်း မှန်းချက်နဲ့ မကိုက်ခဲ့ရသလို Obsolete ဖြစ်နေတဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ MacBook Air ကို Refresh လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ 13.3” Size နဲ့ပဲ မိတ်ဆက်ခဲ့သလို ထူးခြားသွားတဲ့အချက်က Scissor Switch Butterfly Keyboard ဖြုတ်ပစ်ပြီး Key Travel ပိုကောင်းတဲ့ Magic Keyboard နဲ့ ပွဲထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
အလားတူ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းမှာ ပိုကောင်းလာတယ် ထင်ရတဲ့ Ice Lake Y-series Processor နဲ့ Refresh လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ၂၀၂၀ မှာ Generation မြင့်လာတယ် ဆိုတာထက် Windows PC တွေနဲ့ Keep up လုပ်လာနိုင်တယ်။
တနည်းအားဖြင့်ဆိုရသော် CPU အပိုင်းမှာ မျိုးဆက်တစ်ဆက်လောက် နိမ့်နေခဲ့ရာက ဒီတခေါက် Line-up က 10th Gen Processor တွေနဲ့ ဖြစ်လာပါတယ်။ ထို့နည်းတူစွာ စျေးနှုန်းချင်းတူရင်တောင် Storage Option ကို ၂ ဆ တိုးပေးလိုက်လို့ ဝယ်ယူဖို့ စဥ်းစားနေရင် 2020 MacBook Pro 13 ကို ညွန်းချင်ပါတယ်။
Best Class IPS Display
Hardware ပိုင်းမှာ တန်ဖိုးလိုက် ကွာခြားမှုရှိပေမယ့် MBP 13 ရဲ့ အနှစ်ကျဆုံး အချက်က Retina Display ပါ။ MacBook Air 2020 မှာ အလားတူ Panel မျိုးသုံးထားပေမယ့် MBP အရည်သွေးက P3 Colour Format ၊ 500 nits Brightness ထောက်ပံ့ထားပါတယ်။
2560 x 1600 (16:10) Resolution ဆိုတာက ကျနော်တို့လို Content Writer သမားတွေအတွက် မျက်စိကျစရာ ဖြစ်စေသလို Colour Accurate Panel ဖြစ်တဲ့အတွက် Professional Class အဖြစ် သုံးကျပါတယ်။
တတိယမျိုးဆက်လောက်ထိ Butterfly Keyboard ထုတ်ပြီး နေရာအထားသိုနည်းအောင် ပြုလုပ်ခဲ့ပေမယ့် အမှတ်မရှိဘူးလို့ပဲ ဆိုရမှာပါ။ ပါးလွာတဲ့ ဒီဇိုင်းအတွက် 0.3mm Key Travel ပထမဆုံး သုံးခဲ့တဲ့ New MacBook ဆိုရင် Keyboard ကိုင်တဲ့အခါ ထိမိတယ်လို့တောင် ခံစားချက် မပေးပါဘူး။
Magic Key ရောက်လာတဲ့အခါမှ 1mm တိုးပေးလိုက်သလို နေ့တဓူဝ 2.0mm Key Travel သုံးနေတဲ့ ကျနော့်အတွက် အားမရစရာ ဖြစ်နေဆဲပါ။ ဒါမယ့်လည်း 3rd Gen Butterfly ရဲ့ 0.5mm ထက် ပိုများလာတဲ့အတွက် MacBook User တွေအတွက် ဟန်ကျစေမှာပါ။
ကျန်တာတွေက NewsRoom မှာ ကြေညာထားတဲ့အတိုင်း ပြောရရင် Physical Esc Key ၊ Touch Bar နဲ့ TouchID တို့ ပါဝင်မှာပါ။
MBP 2020 မှာ 10th Gen Processor သုံးထားပြီ ဆိုပေမယ့် သင်းကွဲနေပါတယ်။ Iris Plus GPU က Pro Display XDR နဲ့ 6K Resolution ထောက်ပံ့ထားပြီဆိုမယ့် Full Power သုံးစွဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့ $2,000 တန် MBP ဝယ်မှ ရမှာပါ။
Entry Level ($1,299 နဲ့ $1,499) အလုံးတွေမှာ 8th Gen Processor နဲ့ပဲ သုံးနိုင်သလို Memory နဲ့ Storage Option တွေကိုလည်း ကန့်သတ် ထားပါတယ်။ စာဖတ်သူတွေ မြင်သာအောင် ဇယားနဲ့ ယှဥ်တွဲ ဖော်ပြပါမယ်။
Price ($) Processor Configurable Processor Memory Expandalble Memory Storage Expandable Storage
1,299 8th Gen i5 (1.4 ~ 3.9GHz) 8th Gen i7 (1.7 ~ 4.5GHz) 8G 2133MHz LPDDR3 16GB 256GB 2TB
1,799 10th Gen i5 (2.0 ~ 3.8GHz) 10th Gen i7 (2.3 ~ 4.5GHz) 16G 3733MHz LPDDR4X 32GB 512GB 4TB
အခုလို အနေထားတိုင်း တချို့ တွေးမိမယ့်အချက်က 2020 MacBook Pro 13 ကို Ryzen74000 U-Series Processor ကို မသုံးတာလဲ?
28W i7 Chip အထိ ထောက်ပံ့ထားပေမယ့် Intel ထက် AMD ပိုအားသာတာ စာဖတ်သူတွေ သိထားပြီး ဖြစ်ကြမှာပါ။
ဒါကိုတော့ အထွေထူး ပြောနေစရာ မလိုဘူးထင်ပါတယ်၊ T2 Security Chip ထည့်သွင်းပေးထားပြီး Secure Boot Process နဲ့ SSD မှာ သိမ်းဆည်းထားမယ့် Data တွေ ပိုလုံခြုံမှု ရှိစေမှာပါ။
TouchID အချက်လက်ကိုလည်း ကာကွယ်ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Mac ကို Unlock လုပ်ဖို့မလွယ်၊ Online Password တွေနဲ့ မဝင်နိုင်အောင် Protect လုပ်ပေးမယ့်အပြင် Online Purchase မျိုးအတွက် အချက်လက် ပေါက်ကြားမှု မရှိအောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်မှာပါ။
ကင်မရာ နမူနာနဲ့ ရောင်းချမယ့် စျေးနှုန်းသိရပြီဖြစ်တဲ့ Xperia 10 II